आज माघेसङ्क्रान्ति, दुई सय वर्षपछि मकर संक्रान्तिमा मकर राशिमा पाँच ग्रहको संयोग – Online National Network
काठमाडौं – आज माघेसङ्क्रान्ति पर्व सूर्य मकर राशिमा आएपछि मकर संक्रान्ति पर्व मनाइन्छ । यसपटक मकर राशिमा सूर्यसँगै चन्द्रमा, बुध, बृहस्पति र शनि पनि रहेका छन् । यी पाँच ग्रहको योग दुई सय वर्षमा पहिलो पटक बनेको हो ।
साथै बिहीबार पाँच राजयोग बनेको छ । यसमा सूर्य उत्तरायण हुनु शुभ मानिन्छ । मकर संक्रान्तिमा मंगल, शनि, बृहस्पति र चन्द्रमासँगै रुचक, शश, गजकेसरी, दान र पर्वत नामको राजयोग बनेको छ । यसमा तीर्थ स्नान, पूजा र दान गर्दा पूण्य मिल्दछ । यसका लागि बिहान ८ः४४ देखि साँझ सूर्यास्तसम्म पूण्यकाल रहने छ ।
थारू समुदायले नयाँ वर्षका रूपमा धुमधामका साथ स्नान, दान, एवं खानपिन र रमाइलो गरेर माघीपर्व मनाउँछन् । सूर्य उत्तरायण प्रवेश गर्ने दिन आज थारू समुदायको नयाँ वर्ष अर्थात् माघीपर्व पर्दछ ।
यस पर्वलाई ठाउँअनुसार विभिन्न नाम पनि दिने गरिएको छ । आजदेखि पाँच दिनसम्म धुमधामका साथ तराई क्षेत्रमा यस पर्व मनाइन्छ । बिहानै जलाशयमा गई स्नान, पूजा गरी ठूलाबडाकहाँ गएर आशीर्वाद लिने परम्परा थारू समुदायको छ ।
गाउँका मुखिया सबै मिलेर छनोट गर्ने चलन छ । यस पर्वका अवसरमा महतो, गुरुबा, पुजारी, धामी, झाँक्री, चौकीदार, कमैया, हली, गोठालो, घरायसी काम गर्ने, आदि सबै पदवीको आजै लोकतान्त्रिक विधिबाट निर्वाचन हुने परम्परा छ ।
सरकारले वि.सं. २०७२ साउन २ गते निर्णय गरेर कमैया प्रथा उन्मूलन गरी त्यसै वर्ष माघ १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा ल्याएपछि यस पर्वलाई स्वतन्त्रता दिवसका रूपमा समेत मनाइन्छ । वि.सं. २०७२ देखि भने माघ १ गतेलाई थारू समुदायले अझ बृहतरुपमा मनाउन थालेका छन् ।